Kaydiyaha & Warshadda Wakiilada Kaaliyaha Kiimikada | Soo -saareyaasha, Wax -soo -saareyaasha Shiinaha ee Wax -ka -Qabashada & Kiimikada
Soo-saaraha 98% Vinyltrimethylsilane/VTMS CAS 754-05-2 oo leh qiimo wanaagsan
Xirxirida: 1kg/dhalo ama 25kg/durbaan
Vinyltrimethylsilane/VTMS CAS 754-05-2, waa badeecadeena la soo bandhigay oo leh faa'iidooyin wanaagsan.
Soo-saaraha 98% (3,3,3-Trifluoropropyl) trimethoxysilane CAS 429-60-7 wakiilka isku xirka Silane
Alaabta: (3,3,3-Trifluoropropyl) trimethoxysilane
(3,3,3-Trifluoropropyl) trimethoxysilane waa silane monomeric oo muhiim ah kaas oo isku daraya sifooyinka aad u fiican ee organosilicon iyo fluorine organic labadaba. Molekelihiisa, waxaa jira kooxo falcelin ah oo isku xiri kara agab aan dabiici ahayn iyo kooxo isku xiri kara polymer -ka dabiiciga ah. Waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa wakiilka isku xirka silane ama dhexdhexaad fluoro.
Silanes 99% HMDSO/Hexamethyldisiloxane cas 107-46-0 oo leh qiimaha warshadda
Hexamethyldisiloxane (HMDSO) waa kiimikada horudhaca ah ee ugu caansan taas oo marka lagu daro helium iyo oksijiin soo saari doonta dahaarka silica. waxaa loo adeegsadaa codsiyada macaamiisha kala duwan waxaana loo adeegsan karaa dhex -dhexaadinta soo -saaridda polymer -ka silikooniga ah.
Soo-saaraha 98% (3,3,3-Trifluoropropyl) methylcyclotrisiloxane D3F CAS NO: 2374-14-3
Alaabta: 1,3,5-Tris [(3,3,3-trifluoropropyl) methyl] cyclotrisiloxane D3F
Tayo sare leh 3-Aminopropyltriethoxysilane AMEO CAS 919-30-2 wakiilka isku xirka
Alaabta: 3-aminopropyltriethoxysilane AMEO
2-Aminopropyltriethoxysilane AMEO waa wakiil isku-dhafan oo isku-dhafan oo isku-dhafan oo loo adeegsado codsiyo kala duwan si loo bixiyo dammaanad sare oo ka dhexeeya substrate-ka aan dabiici ahayn iyo polymer-ka dabiiciga ah. Qaybta Silicon-ka ku jirto ee molecule-ku waxay siisaa isku xidhnaan xoog leh substrates. Hawsha ugu horreysa ee amine -ka waxay ka falcelisaa qalab kala duwan oo heerkulbeegga, kuleyliyaha, iyo qalabka elastomeric -ka ah.
Sahayda warshadda Trimethylsilyl acetate CAS No. 2754-27-0 oo leh qiimo wanaagsan
Alaabta: Trimethylsilyl acetate
CAS No. 2754-27-0
Trimethylsilyl acetate (CAS#2754-27-0) waa dhexdhexaad dabiici ah oo muhiim ah. Waxaa loo adeegsan karaa agrochemical, farmashiyaha iyo beerta qallajinta iwm.
Wakiilada Iskuduwaha Warshada Silane Dimethyldimethoxysilane (DMDMOS) CAS 1112-39-6
Alaabta: Dimethyldimethoxysilane (DMDMOS)
Dimethyldimethoxysilane (DMDMOS) waa alkylalkoxysilane monomeric ah. Waxay biyaha ku shubtaa biyaha, waxay sii deysaa methanol, si ay u samayso silanols aad u firfircoon, taas oo sii kordhisa si ay u samayso oligomeric iyo siloxanes polymeric.
Soo-saaraha Vinylmethyldimethoxysilane / Methylvinyldimethoxysilane Cas No. 16753-62-1
Alaabta: Vinylmethyldimethoxysilane / Methylvinyldimethoxysilane
Cas No. 16753-62-1
Xirxirida: 1kg/dhalo ama 25kg/durbaan ama 180kg/durbaan
Vinylmethyldimethoxysilane / Methylvinyldimethoxysilane waa dareere hufan oo aan midab lahayn oo leh ur gaar ah. Waa silikoon dabiici ah oo muhiim ah, kaas oo loo adeegsan karo sidii wakiilka isku xirka Silane.
Tayo sare 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane TMDSO cas no 3277-26-7
Alaabta: 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane / Tetramethyldisiloxane / TMDSO
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane / Tetramethyldisiloxane / TMDSO ayaa lagu milmi karaa dareerayaal badan oo dabiici ah, sida hydrocarbon aromatic iyo hydrocarbons batrool, iwm. Badeecadani waa nooc ka mid ah dhex -dhexaadiyaha silikooniga dabiiciga ah oo si weyn loo isticmaalo, badiyaana waxaa loo adeegsadaa sidii wakiilka xannibaadda silicon -ka dabiiciga ah.
Bixiyaha wakiilka isku xira DEMS/Methyldiethoxysilane/Diethoxymethylsilane CAS 2031-62-1
DEMS/Methyldiethoxysilane/Diethoxymethylsilane waa dareere cad oo aan midab lahayn. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in lagu soo saaro silanes firfircoon oo dabiici ah. Waxa kale oo loo isticmaali karaa caag silikoon ah ama wax lagu daro polymers MS.
Reagent benzohydroxamic acid oo tayo fiican leh (BHA) cas 495-18-1 qiimaha iibka
benzohydroxamic acid (BHA)
Daahirsanaanta: 60%~ 80%
Benzohydroxamic acid (BHA) waa amide. Amides/imides waxay ka falceliyaan azo iyo xeryahooda diazo si loo abuuro gaasas sun ah. Gaasaska ololi kara waxaa sameeya falcelinta amides/imides organic oo leh wakiilo yareeya xoog leh.
Midabka Madow Madow 32 (L-0086) Cas 83524-75-8 oo leh qiimaha warshadda
Tayada ugu fiican ee Madowga Madow 32 (L-0086)
Daahirsanaanta: 95%~ 105%
Xirxirida: 1kg/bac, 25kg/kartoon
Pigment Black 32 (L-0086) waa midabka wax-soo-saarka sare ee perylene, kaas oo si weyn loogu adeegsado balaastikada, rinjiga baabuurka, dahaarka, rinjiga naqshadda iyo khad daabacaadda, waxay leedahay deg-deg xoog leh oo iftiin leh iyo xasilloonida kuleylka, iyo xoogga midabkuna sidoo kale aad buu u sarreeyaa .
<< <Hore 123456 Xiga> >> Bogga 2/6